China Steel Ọdịdị maka multi-storey residential factory na-emepụta | Honghua
Wuhan sentosa mansion Architectural Njirimara: Concrete jupụta nchara tubular Ọdịdị (28 n'ala) • jupụtara n'ime etiti Ọdịdị usoro mejupụtara doo na kọlụm kpuchie na ụfọdụ n'ime bays jupụtara na masonry, mesikwuru ihe, ma ọ bụ ngọngọ mgbidi.
Wuhan sentosa mansion Architectural Njirimara: Ihe ngwugwu jupụtara na nchara tubular (ala 28)
Emi odude ke: No.199, Wansongyuan Road, Jianghan District, Wuhan City
Gburugburu gburugburu: Zhongshan park, Wuhan International Convention and Exhibition Center, Worldlọ Ahịa Worldwa Ọhụrụ
Okporo ụzọ: 20 kilomita site n'ọdụ ụgbọ elu; 3 kilomita site n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè;
Usoro usoro ihe owuwu
Igwe ihe eji eme ihe etinyere n'ime ya bu ogidi na ogidi nke ufodu n’ime ndi ahu juputara n’igwe, ihe eji eme ka aru ma obu mgbidi.
Gbaa mgbidi nwere ike ịbụ akụkụ-elu ma ọ bụ jupụta etiti.
Mgbidi ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ijikọ ya na mpempe akwụkwọ.
Akwa na atụmatụ siri ike na ike nke mgbidi ahụ na-egbochi ịgbanye nke ogidi na ogidi n'okpuru ibu dị larịị. N'ihi ya, etiti usoro ga-eme ka ọ dịkwuo mma.
N'oge ala ọma jijiji, mkpakọ nke mkpịsị aka mkpirisi na-etolite n'ime ahịhịa ahụ n'ihi ya, usoro a na-eme dị ka Braced Frame karịa oge oge.
O nwere ike iru ụlọ iri atọ.
Sịga mgbidi usoro
Ọ bụ mgbidi kwụ ọtọ na-aga n'ihu wuru site na mgbidi siri ike ma ọ bụ mgbidi mgbidi.
Mgbasa mgbidi na-anagide ma ike ndọda ma n'akụkụ mpụta, ọ na-eme dị ka warara miri cantilever doo.
A na-arụkarị ya dịka isi ụlọ
Ọ dị mma maka ịkwado ụlọ toro ogologo ma ọ bụ ihe siri ike ma ọ bụ nchara ígwè. Nke a bụ n'ihi na mgbidi ịkwa osisi nwere nnukwu ike na ume.
Usoro mgbidi shear dabara adaba maka ụlọ nkwari akụ na ụlọ obibi ebe atụmatụ a na-eme n'ala na-eme ka mgbidi na-aga n'ihu.
O nwere ike ịbụ ezigbo mkpuchi na mkpuchi ọkụ n'etiti ụlọ na ụlọ.
shiee mgbidi bughi usoro nwere ike ịbụ echekwa ruo 35 akụkọ ụlọ owuwu.
Mgbidi mgbidi ekwesịghị ịdị na-eche ihu na atụmatụ, ma a na-ahọrọ symmetry iji zere mmetụta torsional.
Nke gara aga: Ngwurugwu ígwè dị elu ụgbọ okporo ígwè dị elu
Osote: Steel gburugburu steepụ